सरकारका मुख्य अंग नै जवाफदेही र जिम्मेवार नहुदा दण्डहीनता बढ्यो - Karobar National Economic Daily
सरकारका मुख्य अंग नै जवाफदेही र जिम्मेवार नहुदा दण्डहीनता बढ्यो
query_builderOctober 10, 2017 12:00 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility412
भानु आचार्य, पूर्व महालेखा परीक्षक
३१ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका भानु आचार्य नेपालको निजामती क्षेत्रमा कुशल प्रशासक र स्पष्ट वक्ताका रूपमा चिनिन्छन् । करिब ११ वर्षअघि अर्थसचिवबाट अवकाश पाएका आचार्यले तीन वर्षसम्म महालेखा परीक्षकको नेतृत्व सम्हाले । उमेर हदबन्दीका कारण एक वर्षअघि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका आचार्य यतिबेला सरकारी सेवाबाट बाहिर छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर र कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका आचार्यसँग उदारीकरणको सुरुवातसँगै विभिन्न ठाउँमा बसेर नीति–निर्माणमा काम गरेको अनुभव छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउन सक्ने खुबी भएका उनी राजनीतिक स्थिरता र संघीयता कार्यान्वयन भए मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य उठाउन सहज भए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन भने कठिन हुने उनको तर्क छ । स्थानीय तहलाई सशक्त भएर काम गर्न उपयुक्त गाइडलाइन र काननु आवश्यक रहेको बताउने उनी जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसके सिंगो संघीयता नै असफल हुने दाबी गर्छन् । सरकारका मुख्य निकाय नै जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदा मुलुकमा दण्डहीनता बढेको बताउने उनीसँग मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार ः
तपाईं पूर्वप्रशासक, अर्थ सचिव, सरकारका विभिन्न ठाउँमा बसेर काम गर्नुभएको छ । तपार्इंको आँखाबाट मुुलुकको अर्थतन्त्रलाई यतिबेला कसरी नियाल्नुभएको छ ?
चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारको अपेक्षा थियो । गत वर्ष देखिएको आर्थिक सुधारले पनि केही आशा पलाएको थियो । तर, अहिले त्यो विश्वास अलि घटेर गएको छ । सबैको ध्यान निर्वाचनमय भएको छ । विकासका कुरामा त्यति ध्यान पुगेको देखिँदैन । निराशा हुने ठाउँ पनि छैन र ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन । सुधार हुन्छ, केही समय लाग्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले प्रक्षेपण गरेभन्दा राम्रो देखियो । सरकारले यसैलाई आधार मानेर चालू आवका लागि ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष राखेको छ, यो कत्तिको सम्भव छ ?
गत वर्षको वृद्धि राम्रो भयो भनेर जुन उत्साह, आशा देखिएको थियो तर अहिले त्यसो भन्ने अवस्था छैन । तराईमा गएको बाढीलाई आधार मानेर एडीबी तथा वल्र्ड बैंकलगायतका दातृ निकायले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने भनेका छन्, उनीहरूको प्रक्षेपण ४.५ छ । तर, आर्थिक वृद्धि मात्रै समृद्धिको आधार होइन, आर्थिक वृद्धिसँगै आउने अरू त्यसका कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले नकार्न सकिन्न । त्यो मात्रै पर्याप्त होइन, यसको निरन्तरताका लागि राजनीतिक स्थिरता मुख्य कारण हो । त्यसैले मेरो विचारमा अहिलेको अवस्थाले यो लक्ष्य आउने अवस्था छैन । योसँगै अहिले देखिएको चिन्ताको विषय भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भरतातिर धकेलिइरहेको छ । व्यापारको कुरा गरौं या रेमिट्यान्सको कुरा गरौं । दयनीय अवस्था छ, त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्था अलि नजुक छ ।
पहिलो पटक संघीय बजेट ल्याएर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि खर्च बढ्ने सरकारको जुन आपेक्षा थियो त्यो हुन सकेन, यसमा यहाँको विचार के छ ?
यो मानेमा भनौं या संघीयतको पाटोमा हामी संक्रमणकालीन अवस्थामै छौं । विधि, व्यवस्था नभईकन, कर्मचारी व्यवस्थापन नभईकन अरू अपेक्षा गर्न मिल्दैन र सकिन्न पनि । त्यसपछि जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरीको कुरा आउँछ । अहिलेकै अवस्था जनतालाई सुविधा दिन सक्ने छैन । अहिले बीचमा ठूलो ग्याप छ, यो अझै केही समय रहन्छ ।
बजेटको खर्च गर्ने शैली पुरानै भयो, परिमार्जन गर्नुप¥यो भन्ने गुनासाहरू चौतर्फी आउँछन्, तर समस्या जहाँको तही रहन्छन् । यो परम्परालाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिएला ?
यसमा अहिले अन्योल छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत स्थानीय तहमा जाने भनिएको छ । स्थानीय तहमा जाने भने पनि पर्याप्त नीति–नियम नभएकाले जान सक्ने आधार केही छैन । केन्द्रले अधिकार तल पठाएको भनेर तलको अधिकारमा सक्रिय देखिँदैन । यसमा केही समस्या छ ।
अन्योलका बाबजुद स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि यतिका दिन भैसक्यो, तर जनप्रतिनिधिले अझै काम गर्न सकिरहेका छैनन् नि ?
हो, उनीहरूले काम गर्न नसकेको सत्य हो । किनभने कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल छ । यस विषयमा तयारी पहिले नै गर्नुपथ्र्यो, ढिला भयो । निर्वाचनको मिति तय भएपछि नै सेवाप्रवाहको तयारी भएको हो । त्यसैले उनीहरूलाई समस्या भएको हो ।
अधिकार लिने–दिने विषयको अन्योलले काम गर्न सकेनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यति मात्र भन्न सकिँदैन । जब संघीयता लागू हुने भयो, संघीयतालाई आत्मसात् गरिसकेपछि जनप्रतिनिधि भनौं या सरकारी कर्मचारीहरू, यो विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । अधिकार दिने र लिने लफडामा जान मिल्दैन । पर्याप्त ऐन–कानुन र गाइडलाइनको अभावले गर्दा काम गर्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ । यो अवस्था केही समय लम्ब्याउन सकिएला, तर ऐन–कानुनले स्थापित गरिसकेपछि त्यहाँ पुग्नु पर्दैन ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्रोतको आकलन सही तरिकाले गर्नुपर्छ । १५ वर्षको बीचमा स्थानीय तह कर्मचारीबाट चलिरहेको थियो । यसमा केही कमजोरी देखिएका होलान्, तिनलाई सुधार गरेर लानुपर्छ । नयाँ रिसोर्सको जगेर्ना र कुनै किसिमका बेथितिहरू छन् भने सुधार हुन सक्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण विधेयक हालै मात्र पारित भएका छन्, के अब जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्लान् ?
पक्कै पनि । विधेयक पास भएका छन् । अहिले देखिएको अन्योल, सर्कुलरको परिपत्रका आधारमा चल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यी ऐन निर्वाचनपहिले नै आउनुपर्ने थियो, ढिला आए पनि कार्यान्वयनमा आएपछि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज हुन्छ ।
कतिपयले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जान सकेन भनेका छन्, कतिपयले स्थानीय तहले अधिकार लिन सकेनन् भन्ने पनि छ, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
अहिले नै त्यसरी मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । अधिकार लेनदेनमा केही द्वन्द्व पनि छ । पहिलो पटक संघीय संरचनामा आएकाले चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले काम गर्न पाएका छैनन् । यस्तो मूल्यांकन त कामका आधारमा गर्नुपर्ने हो । ऐन–नियम बनिसकेपछि सिंहदरबारले चाहेर रोकिँदैन । स्थानीय तहले गर्दिनँ भनेर पनि पाउँदैन । ऐनमै प्रस्ट भैसकेपछि विवाद हुँदैन, भए पनि केही विषयमा हुन सक्छ । अहिले ऐन–कानुनसँगै व्यवहारमा पनि अस्पष्टता देखियो भने त्यस्तोमा छलफल गर्नुपर्छ । अन्यथा जनप्रतिनिधिले ‘ए हामी गलत बाटोमा गयौं कि ?’ भन्ने अवस्था आउन सक्छ । यसरी काम गर्न नसक्दा संघीयतामा नै प्रश्न उठ्न सक्छ । गलत काम गर्दा त संघीयता नै असफल हुन सक्छ नि !
सँगसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ, यसको समायोजन गर्न भन्दै कर्मचारी विधेयक पनि हालै पास भएको छ । यहाँको विचार के छ ?
कर्मचारीको सिस्टममा जानुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी तन्त्र राज्यको एउटा अभिन्न अंग हो । सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न बनेको संस्था हो । अहिले कर्माचारीलाई यहाँ जान्छु, यहाँ जान्नँ, यो सुविधा दिए जान्छु भन्ने अवस्थामा कसले पु¥यायो ? यो विषयमा मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । कर्मचारी भनेको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । गलत छ भने रोक्ने हो । संघीयतामा हामी गइसक्यौं । संघीयतालाई आत्मसात् गरेपछि कर्मचारीले सरकारको नियम–कानुनभन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।
यहाँले कर्मचारीको कुरा गर्नुभयो । हामीकहाँ कर्मचारी तन्त्र नै विकासको बाधक हो भन्ने आरोप छ, यसलाई मान्नुहुन्छ ?
यसरी त म मान्दिनँ । सबै कर्मचारी खराब छन् भनेर बुझ्नु हुँदैन । विश्वमा कर्मचारी तन्त्रलाई माथिल्लो तहमा राखिन्छ । प्रोफेसनल तहमा राखिन्छ । नेपालको कर्मचारी कमजोर छैन । तर, कमजोरी कहाँ रह्यो भने केही व्यक्तिमा वा केही कर्मचारीमा कमजोरी रह्यो । त्यो कमजोरीको फाइदा सत्तामा, शासनमा पुग्नेले लिए र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिए, जसले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई नै धुमिल्यायो । कर्मचारीको मर्म, अधिकार र कर्तव्यलाई राजनीतीकरण गरियो । यसो गर्नु हुँदैननथ्यो । त्यसैले कर्मचारी तन्त्र बाधक हो भन्न मिल्दैन । उनीहरूलाई काम गर्नचाहिँ दिइएन ।
काम गर्न नसकेको हो या काम गर्न नदिएको हो ?
दिन नसकेको हो । त्यसभित्र दुईवटा पक्ष छन् । एउटा पक्ष सक्षम छ जसले काम गर्न सक्छ, अर्को पक्ष्य असक्षम पनि छ जसले राजनीतिक छत्रछायामा बसेर काम गर्छ ।
विकेन्द्रीकरणको स्वरूप धेरै पहिलेदेखि नै आएको हो । त्यो स्वरूप र अहिलेको स्वरूपमा फरक छ । संविधानले नै स्पष्ट भनेको छ, यसले आर्थिक विकासमा टेवा दिन्छ नै । विकेन्द्रीकरण विकासको सोच हो । विकेन्द्रीकरणको सुरुवातसँगै भएका आर्थिक वृद्धिहरूले निरन्तरता पाएको भए अहिले हाम्रो आर्थिक हैसियत विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि धेरै माथि पुग्थ्यो । त्यो सोचमा हामी अलिकति परिवर्तन गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । मैले अघि पनि भनिसकें, आर्थिक सुधारका कुरा लानुपर्छ । अरू अर्थमा पनि जानुपर्छ । त्यसरी जाँदाखेरि विकासको तौरतरिकामा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आज त्यहींको मान्छेले त्यहाँको दिगो स्थायित्वको चेतना आएको छ । चेतनालाई अहिलेको विकास मोडलमा लानुपर्ने हुन्छ ।
विकासलाई पनि संघीय मोडलमा लानुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, मुलुक अब संघीय स्वरूपमा गइसक्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगको अब औचित्य नै छैन । अर्को कुरा, जबसम्म हामीले उत्कृष्टता मान्दैनौं, यो कुरा सबै ठाउँमा लागू हुन्छ । जुनसुकै कुरामा पनि उत्कृष्टतालाई सम्मान ग¥यौं, त्यसले सबैलाई फाइदा हुन्छ । अर्को शिक्षाको कुरा छ । उत्पादन, साक्षरतामा जोड दिने र त्योभन्दा माथिकोमा ध्यान दिन सकिएन भने बाहिरको जनसंख्यासँग प्रतिस्पर्धी हुन नसकेपछि भोलिका दिनमा पनि खाडीमा पठाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले पनि शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ, लगानी पनि बढाउनुपर्छ । अर्को कुरा, म महालेखामा बसेकाले पनि अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नै हो । नैतिकताबाहेक ऐन, नियम, विधि, कानुनअनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? समस्या यहीं निर आउँछ । जवाफदेहिता कसैले नलिने हुँदा दण्डहीनता बढेर जाने हो । यो कुरा तलदेखि माथिसम्म लागू हुन्छ । यो सा¥है चिन्ताको विषय हो ।
यसको अन्त्य चाहिँ कसरी गर्ने ?
शासन व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ, यन्त्रपनि बलियो हुनुपर्छ, संस्थागत व्यवस्था पनि बलियो हुनुपर्छ । लोकतन्त्रभित्र सरकार बलियो हुनुपर्छ । हाँगाबिगा सबै पर्छन् । राज्य सञ्चालनका तीनवटा मूल निकाय न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बलियो हुनुपर्छ । यदि कुनै कुरामा कमजोरी, गल्ती छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसले अन्त्य हुन्छ ।
खर्चालु हो । हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा बहसमै रह्यो । करका ट्याक्सका आधारहरू छन्, वित्तीय हिसाबले कसरी थेग्छौं होला भन्ने प्रश्न लागेको थियो । त्यही सोचाइले अहिले राजनीतिक तालमेल भैरहेको छ । संघीयता महँगो हो, त्यसमा कुनै शंका छैन तर यो लागू गर्ने बाध्यता छ भने त्यसको विकल्प त खोज्नुप¥यो । साधनस्रोत खोज्नुप¥यो, त्यसले जनप्रतिनिधिलाई जथभावी गर्ने ठाउँ दिँदैन । उसले जथाभावी गर्न सक्दैन । ठाउँहरू बढाउनुप¥यो । भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ घटाउनुप¥यो । केन्द्रबाट बाँडफाँडका कुरा छन्, त्यसमा विभाजन आउँछन् । संघले पनि एकलौटी रूपमा पाएको रिसोर्स संघको स्वरूपमा लैजानुप¥यो, खर्च गर्न पनि मितव्ययिता जुटाउनुप¥यो । हामीकहाँ उदारीकरणको सुरुवातसँगै केही कुरा आएका छन्, ती आफैंमा पर्याप्त होइनन् । आन्तरिक स्रोतहरू पर्याप्त नहुन सक्छन्, नयाँ–नयाँ कुरा बढाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ । योसँगै मध्यम आयमा २०३० मा पुग्ने भनिएको छ । लगानी बढाउनुप¥यो । बाह्य मुलुकले दिने ऋण पनि बढाउनुप¥यो । यो सबै कुरा राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेर ठोक्किन्छ, दलले मेरै पार्टी, नेता भनेर थाल्यो भने केही हुँदैन ।
जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसक्दा र अधिकारको विषयमा देखिएको अन्योलताले राजस्व असुलीमा समेत समस्या देखिएको छ, यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला ?
नसक्ने भन्ने होइन । विगतको अनुभव पनि छ मसँग । अघिल्लो वर्षको राजस्व असुलीको लक्ष्यलाई आधार मानेर यो वर्ष ७ सय ३० अर्बको लक्ष्य धेरै होइन । प्रश्न के हो भने संघीयताको कुराले भन्दा पनि मुख्य राजस्व त केन्द्रले नै उठाएको छ । मूल स्रोत केन्द्रमै छ । संघीय सरकारको संरचना अहिलेकै अवस्थामा रहेकाले उठ्छ । संघीय संरचनाबाहेकको स्थानीय तहमा गएको अधिकार र करको हिस्सा ठूलो हँुदैन । अहिले देखिएको खटपट छ नि, यो लामो समय टिक्दैन, त्यो पनि उठ्छ ।
ठूलो किसिमको परिवर्तन नभए पनि संघीयतामा गएपछि परिवर्तन गर्र्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा संस्थागत परिवर्तन गर्नु आवश्यक देख्छु म । केही यस्ता कुरा छन् जुन उद्देश्यले दिइन्छ, त्यसको मूल्यांकन हुँदैन । नीतिगत कुरामा परिवर्तन हुनुपर्छ । चलिरहेको अवस्थामा प्रशासकीय नियन्त्रणका कुरामा परिमार्जन हुनु जरुरी छ ।
राजस्व असुलीसँगसँगै करदाताले अहिले पनि आफूले दिएको करको अपनत्व पाउन सकेनन् भनिन्छ, यसमा कसरी सुधार गर्न सकिएला ?
यसमा ठूलो ग्याप छ । राजस्वमा नेपालमा आयकरको हिस्सा अलि कम छ । एउटा त त्यो सुधार गर्नुपर्ने छ । आयकर उठ्नसक्ने ठाउँ कहाँ कति छ भन्ने बिचौलिया कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । यी ठाउँमा कर्मचारीतन्त्र बढी नै हावी हुन्छन् । नीतिहरूमा उनीहरू पुग्दैनन् ।
तपार्इं लामो समय महालेखा नियन्त्रक हुनुभयो । हरेक वर्षजसो बेरुजु बढिरहेको छ, बेरुजु फछ्र्योट हुन नसक्नुको कारण के रहेछ ?
तीन वर्ष महालेखा परीक्षक भएर काम गरें । वास्तविक स्थितिलाई बाहिर बुझाउन नसकेको जस्तो लाग्छ । फछ्र्योट गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालय देखाउने हो, सरकार तथा संवैधानिक अंग र सार्वजनिक लेखा समिति हो । महालेखा परीक्षकले जुन सिस्टममा छ, परीक्षण गर्छ, जवाफदेही हेर्छ, प्रतिवेदन निकाल्छ, राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछ र संविधानसभामा पुग्छ । महालेखा परीक्षक अख्तियार होइन; संविधानले, कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर सिस्टम चलाउन सक्दैन । सम्बन्धित कार्यालय, विभागहरूले काम गर्छन् र अडिटर सन्तुष्ट भयो भने मात्र काम अघि बढाउँछ ।
महालेखाले कारबाही गर्न नसके पनि एक्सन त लिन सक्छ होला नि ?
लेखेर दिन्छ, कारबाहीका लागि सिफरिस गर्छ । सम्बन्धित निकायहरूले नै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने हो ।
उसो भए महालेखाको दायित्व वर्षमा एकपटक प्रतिवेदन निकालेपछि सकिने हो ?
होइन, सकिँदैन । आफंैले गएर कारबाही गर्न सक्दैन ।
हामीकहाँ निर्देशन दिने काम मात्र भएको देखिन्छ, कार्यान्वयनमा जहिले पनि हामी चुकिरहेका हुन्छौं । महालेखाले दिएको निर्देशन अन्य निकायले किन पालना गर्दैनन् ?
हामीले अपनाएको सिस्टम नै परिवर्तन गरेर कारबाही गर्ने अधिकार दियो भने मात्रै महालेखाले एक्सन लिन सक्छ ल्याटिन अमेरिकन, युरोपियनहरूले यो सिस्टम लागू गरिरहेका छन् । महालेखाले दिएको निर्देशन पालना गरेको भए वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने थियो । गरे पनि ठीक नगरे पनि ठीक भन्ने मानसिकता छ ।
यस्तो अवस्थामा सशक्त हुने निकाय को हो त ?
संसारभरि महालेखाको कार्यान्वयनमा सशक्त हुने भनेको सार्वजनिक लेखासमिति हो, तर हामीकहाँ लेखा समिति सशक्त छैन । संसारभर महालेखाले भनेको कुरा सिनेटले सुन्छ । सुधार हुँदै जान्छ । हामीकहाँ त्यो अवस्था छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थसचिव महालेखा परीक्षक